क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हिरामणि दुःखीलाई पितृशोक, पार्टी र देजमोद्वारा श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना व्यक्त - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हिरामणि दुःखीलाई पितृशोक परेको छ । उहाँका बुबा दाङ तुलसीपुर निवासी पं.देवीराम पौडेलको ८३ बर्षको उमेरमा बुधबार विहान निवासमै निधन हुन पुगेको छ । फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित पौडेल लामो समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो ।
दिवंगत देवीराम पौडेल नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को तुलसीपुर नगर समितिको सल्लाहकार समेत रहनु भएको थियो । उहाँ दुई छोरा तथा तीन छोरीका पिता हुनुहुन्थ्यो । हिरामणि दुःखी उहाँका जेठा छोरा हुनुहुन्छ भने उहाँको कान्छो छोराको केही केही महिनाअघि मात्र निधन भएको थियो ।
उहाँको निधनबाट अत्यन्तै दुःखित एवम् चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल केन्द्रीय समितिले श्रद्धाञ्जली वक्तव्य जारी गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पार्टी महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “आज १७ असार २०७७ मा दाङ्ग तुल्सिपुर निवासी पं. देवीराम पौडेल अर्थात् क.भीष्मको फोक्सोको क्यान्सर रोगका कारण ८३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । पार्टीको तुल्सिपुर नगर समितिको सल्लाहकार रहनु भएका उहाँ पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य क. हीरामणि दुःखीका पिता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनबाट हामी अत्यन्तै दुःखित एवम् चिन्तित भएका छौं । उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा पार्टीद्वारा सञ्चालित जनयुद्ध लगायत विभिन्न सङ्घर्षहरूमा सक्दो सहयोग पु¥याउँदै आउनु भएको थियो । उहाँकी जीवनसंगिनी हुनुहुन्छ । उहाँ दुई छोरा तथा तीन छोरीका पिता हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बुहारीहरु, जुवाइँहरु, नाती नातिनाहरु र पनाति पनातिनाहरु छन् । हाम्रो पार्टी पं. देवीराम पौडेल (क. भीष्म) प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । साथै, पार्टी सबै शोकसन्तप्त परिबारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।”
त्यसैगरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र इच्छुक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष क. हिरामणि दुःखीका पिता क. देवीराम पौडेलको आज विहान ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको खवरले हामी अत्यन्त दुःखित भएका छौं । क. देवीराम पौडेल देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल दाङ जिल्लाको तुल्सीपुर नगर समितिका सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । वहाँ प्रति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क. हिरामणि दुःखी लगायत सबै शोकसन्तप्त परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।”